Home Somali News USA: Kulan taarikhi ah oo dhex maray Maraykanka iyo Cuba
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in kulankii uu la qaatay madaxweynaha Cuba Raul Castro uu noqon karo kullan wax badan ka badeli kara xiriirka Maraykanka iyo wadamada latin Amerika.
Wadahadalada ay ku yeesheen dalka Panama ayaa ahaa kuwii ugu horeeyey oo rasmi ah oo dhax mara labada dal in ka badan nus qarni.
Obama ayaa wadahadalada ku tilmaamay kuwa mira dhal ah, kuna dhehnaaa furfurnaansho waxa uuna intaasi ku daray in Maraykanka aanu doonayn in u isbadel dhinaca xukumadda ah uu ku sameeyo Cuba.
Muhimada kullanka, wax aka hadalay labada mas’uul iyadoo Obama uu kulankaasi ku tilmaamay mid taarikhi ah, isla markaasna uu sheegay in uu rajaynayo in ay sii wadi doonaan hormarka ay ku talaabsadeen..
Waxa uu ku tilmaamay kulankaasi mid isbadel ku keeni kara xiriirka Maraykanka iyo guud ahaan wadamada Gobolka.
Hoggaamiyaasha Latin Amerika iyo Karebiyaanka ayaa soo dhoweeyey dib u heshisiinta dhax martay Maraykanka iyo Cuba, waxayna sheegeen in ay ahayd taalabo geesinimo ah, laguna soo afjarayo cadaawadii uu reebay dagaalkii qaboobaa.
Somaliland: Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Oo Su’aalo Laga Waydiiyey Amniga Dalka